Uxanduva lweNtlalontle-Shenzhen SOSLLI Technology Co, Ltd.
I-SOSLLI grasps "I-SOSLLI yenza umhlaba ube ngcono" imbono yoxanduva lentlalontle, ixhasa ngokupheleleyo imigaqo-nkqubo kunye nemigaqo ye-UN global compact, egxile kwisicwangciso kunye nakwinxalenye yamalungelo oluntu, abasebenzi, okusingqongileyo kunye nokuchasana nenkohliso i-10 imigaqo, kwaye isekwe "I-6 yoqhelaniso" yokuzibandakanya kwendlela yokusebenza yokuzibandakanya, thatha ngenkuthalo kubathengi, kubaqeshwa, amaqabane, abatyali mali, ngendalo kunye noxanduva lwentlalo.
1. Uphuhliso oluzinzileyo
2.SOSLLI isimilo kunye nokuthotyelwa
4. Uxanduva kwimveliso
5. Indawo esingqongileyo
6. Isixokelelwano sonikelo lwehlabathi
Imigaqo elishumi ye-UN Global Compact
Ukuzinza kwamashishini kuqala ngenkqubo yexabiso lenkampani kunye nendlela esekwe kwimigaqo yokwenza ishishini. Oku kuthetha ukusebenza ngeendlela, ubuncinci, ukufezekisa uxanduva olusisiseko kwiindawo zamalungelo abantu, ezabasebenzi, okusingqongileyo kunye nokulwa urhwaphilizo. Amashishini athembekileyo enza uxabiso olufanayo kunye nemigaqo naphina apho akhoyo, kwaye ayazi ukuba iindlela ezilungileyo endaweni enye azilungisi kwenye. Ngokudibanisa iMithetho elishumi ye-UN Global Compact kwizicwangciso, imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo, kunye nokuseka inkcubeko yokunyaniseka, iinkampani azigcini nje ngokugcina uxanduva lwazo olusisiseko ebantwini nakwiplanethi, kodwa zibeka nenqanaba lempumelelo yexesha elide.
Imigaqo elishumi ye-UN yeZizwe eziManyeneyo kwiNgxelo yeZizwe eziManyeneyo isuselwa: iSibhengezo seLungelo lamaLungelo aBantu, isiBhengezo soMbutho wezabaSebenzisi seHlabathi ngeZiseko zoMgaqo kunye naMalungelo emsebenzini, isiBhengezo seRio kwindalo esingqongileyo kunye nophuhliso, kunye neNgqungquthela yeZizwe eziManyeneyo ngokuchasene norhwaphilizo.
Umgaqo 1: Amashishini kufuneka axhase kwaye ahloniphe ukukhuselwa kwamalungelo abantu abhengezwe kumazwe aphesheya; kwaye
Umgaqo 2: qinisekisa ukuba awadibaniyo nokuxhatshazwa kwamalungelo abantu.
Umgaqo 3: Amashishini kufuneka alondoloze inkululeko yokuzibandakanya kunye nokwamkelwa ngokukuko kwelungelo lokudibana ngokudibeneyo;
Umgaqo 4: ukupheliswa kwazo zonke iintlobo zokunyanzelwa kunye nokunyanzelwa;
Umgaqo 5: Ukupheliswa okusebenzayo kokusebenza kwabantwana; kwaye
Umgaqo 6: ukupheliswa kocalucalulo ngokubhekisele kwingqesho nomsebenzi.
Ummiselo wesi-7: Amashishini kufuneka axhase indlela yokuphepha kwimiceli mngeni yokusingqongileyo;
Umgaqo 8: thatha amanyathelo okukhuthaza uxanduva kwindalo esingqongileyo; kwaye
Umgaqo 9: khuthaza ukuphuhliswa kunye nokufakelwa kwetekhnoloji yendalo esingqongileyo.
Umgaqo 10: Amashishini kufuneka asebenze ngokuchasene norhwaphilizo ngazo zonke iindlela, kubandakanywa nokuphangwa nokunyoba.
Iiseli zebhetri zeLithium Ion, Ipakethi yebhetri yamandla, I-20ah iLithium Ion ibhetri, Ipakethi yeBhetri yeLithium, Ibhetri yamandla eLithium, I-3.6v ibhetri yeLithium-Ion,